Taorian’ny fanafihana mihoson-drà nihatra tamin’ilay mpitarika mpanohitra, maneho tahotra mankany amin’ny fasisma ny fitsikerana ny fitondrana Serba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2018 16:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 简体中文, русский, Italiano, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana novambra 2018)
Borko Stefanović, mpanao politika Serba, mampiseho ny akanjony feno rà nandritra ny valan-dresaka tamin'ny 24 Novambra 2018. Sary avy amin'ny sary Twitter Alliance for Serbia.
Ny takarivan'ny zoma 23 Novambra 2018, vondrona jiolahim-boto mitam-piadiana sy misaron-tava miaraka amin'ny kibay sy vy no nanafika an'i Borko Stefanović, filohan'ny antoko politika Serba ankavia sy mpanorina ny vondrona mpanohitra Firaisambe ho an'i Serbia.
Araka ny voalazan'ny tranokalam-baovao Istinomer Vesti, nidaroka tamin-kerisetra ireo mpikatroka roa avy amin'ny antoko ankavia Serba ihany koa ireo jiolahim-boto. Tapaka mihitsy ny nifin'i Boban Jovanović ary rovitra ny vavany, Marko Dimić kosa niharan'ny totohondry marobe tamin'ny loha. Tsy maintsy nentina tany amin'ny hôpitaly avokoa izy telo mba hotsaboina haingana. Tokony hanatrika hetsika ara-politika tao an-tanànan'i Kruševac any Serbia afovoany i Stefanović sy ireo mpikatroka ny antoko tamin'ny fotoanan'ny fanafihana.
Araka ny fanambarana iray navoakan'ny Serba Ankavia:
“Nisy vondrona mpanafika mitam-piadiana miaraka amin'ny rojo nanakana an'i Stefanović teo anoloan'ny kaominina Rasadnik ao Kruševac, nadarabony tamin'ny arabe izy ary nodarohany mafy. Raha niezaka nanampy azy i Jovanović sy Dimić, dia notafihan'ireo mpanafika ihany koa .”
Rehefa nandre momba ilay fanafihana, niditra media sosialy ny mpikambana ao amin'ny mpanohitra sy ireo mpiserasera hafa mba hampandre ny vahoaka momba ny toe-draharaha. Indrindra fa nizara sary misy ny sehatry ny heloka izy ireo. Nisioka ny ben'ny tanànan'i Belgrade teo aloha, Dragan Djilas hoe:
Ny fanafihana an'i Borko dia fanafihana izay olona misaina an-kalalahana sy maneho hevitra hafa noho ny an'ny governemanta. Nanambara ny fisokafan'ny vanim-potoana fihazana antsika rehetra ny antso daroka tambabe nataon'i Aleksandar Vučić sy ny mediany. Ny fanafihana an'i Borko no voka-dratsy mivantana avy amin'ny rivotra iainana mahatsiravina izay tsy maintsy iainantsika rehetra.
Araka ny filazan'i Srđan Milivojević avy amin'ny Antoko Demokratika (DS), ny hetsika izay tokony natrehan'i Stefanović sy ireo mpikatroka dia forum ho an'ny daholobe karakarain'ny Alliance for Serbia matetika, ary atrehin'ireo mpitarika azy, noho izany, nikendry ireo mpikambana ao amin'ny hetsika Dveri, ny DS, ny Antokom-bahoaka ary ireo antoko hafa ihany koa ny fanafihana. Niteny tamin'ny gazety mpivoaka isan'andro, Danas i Milivojević fa olona telo hafa no naratra tamin'ilay fanafihana.
Ny mpikambana ao amin'izy ireo no nomen'ny Alliance for Serbia tsiny tamin'ny fanafihana, nilaza fa vokatry ny fampielezan-kevitra manaratsy nataon'ny fitondran'ny filoha Aleksandar Vučić tamin'ny mpanohitra ara-politika azy isan'andro izany.
Ny alina taorian'io, nanambara ny polisy Serba fa nosamborin'izy ireo ny olona roa ahiahiana fantatra amin'ny litera fanombohan'ny anarana sy ny taonany ihany -M.Ž. (30 taona) sy D.G. (31 taona). Voatazona mandritra ny 48 ora ireo olona ahiahiana, taorian'izany dia nentina tany amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna izy ireo izay hametrahana fiampangana heloka bevava
Na dia talohan'ny fanambarana nataon'ny mpitandro filaminana aza, dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny filoha Vučić, namoaka ny vaovao momba ny fisamborana ireo mpanafika. “Namaly haingana ny fanjakana ary nanao ny asany, mampiseho fa tsy repoblikan'akondro i Serbia izay ahafahanao manenjika na iza na iza noho ny antony manokana,” hoy i Vučić, ary nanampy fa tsy manana zo hitaky sazy hentitra kokoa izy, satria fitsabahana amin'ny fahaleovantenan'ny fitsarana izany.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety notontosain'ny Alliance for Serbia [Firaisankina ho an'i Serbia] tamin'ny Asabotsy maraina, nilaza i Borko Stefanović, feno fehiràtra fa tokony heverina ho fikasana hamono olona ny zava-nitranga, satria ninia nidaroka azy tamin'ny vy teo amin'ny lohany ireo mpanafika ary avy eo nandaka ny lohany tamin'ny kiraro baotin'izy ireo. “Nomanina sy napetraka mialoha daholo izany,” hoy izy.
Nandritra ny valan-dresaka, nasehon'i Stefanović ny akanjony feno rà nanaovany tamin'ny fotoanan'ny fanafihana feno herisetra. Naneho fankasitrahana noho ny fanohanana marobe avy amin'ireo namana sy mpiara-miasa aminy izy, nilaza izy fa “hiady isika mba hiantohana an'i Serbia tsy hijanona ho firenena feno akanjo mihoso-drà, na firenena handatsahana ny ràn'ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana .”
Maro ireo mpampiasa tambajotra sosialy Serba no nihevitra ny fanafihana ho toy ny fambara mankany amin'ny fasisma. Mampitaha ny toe-draharaha amin'ny lalan'ny antoko Nazi ao Alemaina, nisioka ilay talen'ny sarimihetsika fanta-daza Srđan Dragojević fa “miditra ny taona 1936 isika”, vanim-potoana nifangaroan'ny antoko sy ny fanjakana.
Raha nisy olona nampitandrina fa fasisma ity, dia nihomehy azy ireo fotsiny ianao.
Nizara fampitahana tahaka izany koa ny hafa, milaza ny fanombohan'ny famongoran'ny Nazi an'ireo mpiray tanindrazana tondroin'izy ireo fa tsy tiana:
Lehilahy efatra miaraka amin'ny bara vy nanafika an'i Borko Stefanović.Tsy afaka mampiasa tohan-kevitra izy ireo, ka mifindra any amin'ny famonoana ara-batana. Nidina tao Serbia ny Crystal Night.
Nandritra ny taona 1990, niasa toy ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao nandritra ny governemantan'ny mpanao didy jadona Slobodan Milošević ny filoha Serba ankehitriny, Aleksandar Vučić. Betsaka ihany koa ny fampitahana teo amin'ireo fitondrana roa ireo.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitondran'i Slobodan Milošević sy Aleksandar Vučić dia i Milošević nampiasa ny polisy sy ny fiarovam-panjakana mba hanenjika ireo olona tsy mitovy hevitra aminy. Vučić indray voahodidina jiolahim-boto, jiolahim-boto amin'ny baolina kitra sy ireo tia tanindrazana sandoka ary jiolahim-boto maro samihafa. Tokony hanaiky fisian'izany ny mpanohitra, ary mivonona ny hitolona amin'izay’ (hanala ny fonon-tanana fotsy).
Tamin'ny valan-dresaka tamin'ny Asabotsy, namerina ny sasany tamin'izany lahateny izany i Borko Stefanović. “Tsy maintsy miara-miatrika izany isika …Hivoaka amin'ny maizina izy ireo. Rehefa miaraka isika, dia tsy ho afaka ny hanafika amin'ny fomba fasista, osa toy izany izy ireo”, hoy izy.